တိုက်ဖွန်းမုန်တိုင်းဒဏ်ကို အလူးအလဲခံနေရတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်ပရိသတ်တွေအတွက် အားပေးစကားပြောလာတဲ့ ပိုင်တံခွန် - Cele Connections
တိုက်ဖွန်းမုန်တိုင်းဒဏ်ကို အလူးအလဲခံနေရတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်ပရိသတ်တွေအတွက် အားပေးစကားပြောလာတဲ့ ပိုင်တံခွန်
bilie | 12/11/2020 | Celebrity | No Comments
မင်းသားချောပိုင်တံခွန်ကတော့ အနေအထိုင်အေးဆေးပြီး အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် တည်ငြိမ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်တံခွန်ကတော့ သူ့ရဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အရမ်းလန်းတဲ့ တက်တူးတွေကြောင့်လည်း နိုင်ငံတကာက ပရိသတ်တွေရဲ့ အာရုံစိုက်ခံရတယ်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာ Fan Meeting ပြုလုပ်ရတဲ့အထိ အောင်မြင်တဲ့ ပိုင်တံခွန်က ဂျပန်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင် စတဲ့ အာရှနိုင်ငံများအပြင် ဘရာဇီး၊ သြစတေးလျ၊ ဂျာမနီစတဲ့ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေအထိပါ ပေါက်ရောက်အောင်မြင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မြင်တဲ့နေရာကို ရောက်ရှိလာတဲ့ သူ့ရဲ့ ကြိုးစားမှုအပြင် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကြောင့်ဆိုတာကို နားလည်သဘောပေါက်ထားတဲ့ ပိုင်တံခွန်က သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တစဦးတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို လေးစားသူတစ်ယောက်ပါ။ ဒီကနေ့မှာလည်း ပိုင်တံခွန်က နိုဝင်ဘာလအစကတည်းက တိုက်ဖွန်းမုန်တိုင်းဒဏ်ကို အလူးအလဲခံနေရတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်ပရိသတ်တွေအတွက် “Praying for the Phillippine. Stay Safe Everyone” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ အင်စတာဂရမ်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ်။
ပိုင်တံခွန်ကတော့ သူ့ကိုချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် မုန်တိုင်းဒဏ်ကနေ ကင်းလွတ်ဖို့ ဆုတောင်းစကား ပြောခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
တိုကျဖှနျးမုနျတိုငျးဒဏျကို အလူးအလဲခံနရေတဲ့ ဖိလဈပိုငျပရိသတျတှအေတှကျ အားပေးစကားပွောလာတဲ့ ပိုငျတံခှနျ
မငျးသားခြောပိုငျတံခှနျကတော့ အနအေထိုငျအေးဆေးပွီး အရှယျနဲ့မလိုကျအောငျ တညျငွိမျသူတဈယောကျဖွဈတာကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြကို ပိုငျဆိုငျရရှိထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ပိုငျတံခှနျကတော့ သူ့ရဲ့ အမိုကျစားခန်ဓာကိုယျနဲ့ အရမျးလနျးတဲ့ တကျတူးတှကွေောငျ့လညျး နိုငျငံတကာက ပရိသတျတှရေဲ့ အာရုံစိုကျခံရတယျဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ အိမျနီးခငျြး ထိုငျးနိုငျငံမှာ Fan Meeting ပွုလုပျရတဲ့အထိ အောငျမွငျတဲ့ ပိုငျတံခှနျက ဂပြနျ၊ အငျဒိုနီးရှား၊ ဖိလဈပိုငျ စတဲ့ အာရှနိုငျငံမြားအပွငျ ဘရာဇီး၊ သွစတေးလြ၊ ဂြာမနီစတဲ့ အနောကျတိုငျးနိုငျငံတှအေထိပါ ပေါကျရောကျအောငျမွငျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
အောငျမွငျတဲ့နရောကို ရောကျရှိလာတဲ့ သူ့ရဲ့ ကွိုးစားမှုအပွငျ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကွောငျ့ဆိုတာကို နားလညျသဘောပေါကျထားတဲ့ ပိုငျတံခှနျက သူ့ရဲ့ ပရိသတျတစဦးတဈယောကျခငျြးစီတိုငျးကို လေးစားသူတဈယောကျပါ။ ဒီကနမှေ့ာလညျး ပိုငျတံခှနျက နိုဝငျဘာလအစကတညျးက တိုကျဖှနျးမုနျတိုငျးဒဏျကို အလူးအလဲခံနရေတဲ့ ဖိလဈပိုငျပရိသတျတှအေတှကျ “Praying for the Phillippine. Stay Safe Everyone” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ အငျစတာဂရမျစာမကျြနှာမှာ မြှဝပေေးလာခဲ့ပါတယျ။
ပိုငျတံခှနျကတော့ သူ့ကိုခဈြကွတဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျ မုနျတိုငျးဒဏျကနေ ကငျးလှတျဖို့ ဆုတောငျးစကား ပွောခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
ပရိသတ်တွေအတွက် သူကိုယ်တိုင်ရေးသားထားတဲ့ ကဗျာလေးကိုဖတ်ပြရင်း မေတ္တာတရားအကြောင်းကို အလေးအနက်ရှင်းပြလာခဲ့တဲ့ နေတိုးရဲ့ Live ဗီဒီယို